Naproxen vs. ibuprofen: ကွဲပြားခြားနားမှုများ၊ တူညီခြင်းနှင့်သင့်အတွက်ပိုကောင်းသည် - မူးယစ်ဆေးဝါး သူငယ်ချင်း | ဇန္နဝါရီလ 2022
ကုမ္ပဏီ, အဆိုပါကုန်ပစ္စည်း မူးယစ်ဆေးဝါးသတင်း မူးယစ်ဆေးဝါးသတင်း, သတင်း နှိပ်ပါ ကျန်းမာရေး ရပ်ရွာ၊ ကုမ္ပဏီ ကျန်းမာရေးပညာရေး ကုမ္ပဏီ ပြင်းထန်သောအားကစား ကနျြးမာရေးပညာရေး, အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များ ဖျော်ဖြေရေး သတင်း၊ ရပ်ရွာ၊ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆန် ကုန်ပစ္စည်း
အဓိက >> မူးယစ်ဆေးဝါး သူငယ်ချင်း >> Naproxen vs. ibuprofen: ကွဲပြားခြားနားမှုများ၊ တူညီခြင်းနှင့်သင့်အတွက်ပိုကောင်းသည်
Naproxen နှင့် ibuprofen တို့သည်အခြေအနေအမျိုးမျိုးမှနာကျင်မှုနှင့်ရောင်ရမ်းခြင်းကိုကုသရာတွင်အသုံးပြုသည့် NSAID (nonsteroidal anti-inflammatory မူးယစ်ဆေးဝါးများ) ဖြစ်သည်။ NSAID များသည် prostaglandin ဟုခေါ်သောဓာတုပစ္စည်းကိုပိတ်ဆို့ခြင်းဖြင့်အလုပ်လုပ်သည်။ Prostaglandin သည်နာကျင်မှုနှင့်ရောင်ရမ်းခြင်းကိုဖြစ်စေသည်။ Prostaglandin ကိုပိတ်ဆို့ခြင်းဖြင့် NSAID များသည်နာကျင်မှုနှင့်ရောင်ရမ်းခြင်းကိုကုသရန်ကူညီသည်။ naproxen နှင့် ibuprofen နှစ်ခုလုံးကို NSAIDs ဟုလူသိများပြီးတူညီမှုများစွာရှိသည်။
Naproxen နဲ့ ibuprofen တို့ရဲ့အဓိကကွာခြားချက်ကဘာလဲ။
Naproxen (သို့မဟုတ်) naproxen ဆိုဒီယမ်ကို Naprosyn အမှတ်တံဆိပ်အဖြစ်လူသိများပြီး Aleve ဟုလည်းအများသိကြသည်။ ၎င်းကိုယေဘူယျပုံစံတစ်မျိုးတည်းဖြင့်သာ (ဆေးညွှန်းဖြင့်လည်းကောင်း၊ အနိမ့်ထိုးဆေးဖြင့် OTC) နှင့်အခြားဆေးဝါးများနှင့်တွဲဖက်နိုင်သည်။ Ibuprofen ကို Motrin နှင့် Advil တံဆိပ်များမှလူသိများပြီး၎င်းကိုယေဘူယျပုံစံတစ်မျိုးတည်းဖြင့်သာမကအခြားဆေးဝါးများနှင့်လည်းတွဲဖက်နိုင်သည်။ ဆေးညွှန်းသည်ကွဲပြားခြားနားမှုရှိပြီး၊ ဆေးညွှန်းထိုးဆေးထက် OTC ပမာဏနည်းပါးသည်။ ထို့အပြင် ibuprofen သည်ပိုမိုတိုတောင်းသောသက်ရောက်မှုရှိပြီး naproxen ထက် ပို၍ မကြာခဏထိုးလေ့ရှိသည်။
အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ဆေးနှစ်မျိုးစလုံးကိုများသောအားဖြင့်အမျိုးမျိုးသောချောင်းဆိုးခြင်း၊ အအေးမိခြင်းများကဲ့သို့သောပေါင်းစပ်ဆေးများနှင့်အိပ်စက်ခြင်းပုံစံများဖြစ်သောကြောင့် OTC ထုတ်ကုန်ကိုရွေးသောအခါသင့်အတွက်ဆေးမှန်မှန်ရွေးချယ်ရန်သေချာစေရန်သင်၏ဆေးဝါးပညာရှင်နှင့်ဆွေးနွေးခြင်းသည်အကြံဥာဏ်ကောင်းဖြစ်သည်။ ရောဂါလက္ခဏာများ။ ထို့အပြင် naproxen သို့မဟုတ် ibuprofen ပါ ၀ င်သောပေါင်းစပ်ထုတ်ကုန်များတွင်သင်၏ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအခြေအနေများသို့မဟုတ်သင်သောက်သုံးနေသည့်အခြားဆေးဝါးများနှင့်သဟဇာတမဖြစ်နိုင်သည့်ထုတ်ကုန်တစ်ခုပါ ၀ င်နိုင်သည်။ ကလေးများအတွက်ဆေးဝါးကိုရွေးချယ်သည့်အခါကလေး၏အသက်နှင့်အလေးချိန်ပေါ် မူတည်၍ သင့်လျော်သောဆေးထိုးရန်သင့်ကလေးအထူးကုသို့မဟုတ်ဆေးဝါးပညာရှင်နှင့်အမြဲတမ်းတိုင်ပင်ပါ။
naproxen နှင့် ibuprofen အကြားအဓိကကွာခြားချက်များ
မူးယစ်ဆေးအတန်း NSAID NSAID
ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ကဘာလဲ? Aleve, Anaprox DS, Naprosyn Motrin, Advil
မည်သည့်ပုံစံ (များ) ကိုမူးယစ်ဆေးဝါးထဲသို့ဝင်သနည်း။ တက်ဘလက်များ, caplets, softgels တက်ဘလက်များ, caplets, softgels, အရည်ပုံစံများ
စံသောက်သုံးသောကဘာလဲ? အရွယ်ရောက်ပြီးသူ OTC: ၈၂ မှ ၁၂ နာရီတိုင်း ၂၂၂ မီလီဂရမ်
အရွယ်ရောက်သူများ Rx: ၁၂ နာရီလျှင် ၂၅၀-၅၀၀ မီလီဂရမ်
* အစားအစာနှင့်အတူယူပါ အရွယ်ရောက်သူများ OTC: ၄ မှ ၆ နာရီတိုင်း 200 mg (တစ်နေ့လျှင်အများဆုံး 1200 mg)
အရွယ်ရောက်သူများ Rx: နေ့စဉ် 400-400 mg မှ3မှ4ကြိမ် (တစ်နေ့လျှင်အများဆုံး 3200 mg - Dr. consultant)
ပုံမှန်ကုသမှုဘယ်လောက်ကြာမလဲ အရိပ်အယောင်အားဖြင့်ကွဲပြားသည် အရိပ်အယောင်အားဖြင့်ကွဲပြားသည်
ဒီဆေးကိုဘယ်သူကပုံမှန်သုံးသလဲ။ အရွယ်ရောက်ပြီးသူ၊ ကလေးများ ၂ နှစ်နှင့်အထက် အရွယ်ရောက်ပြီးသူ၊ ကလေးများ ၆ လနှင့်အထက်
naproxen နှင့် ibuprofen မှကုသသောအခြေအနေများ
နာပိုရိုနှင့်အီဘူဖရိုသည်နာကျင်မှုနှင့်ရောင်ရမ်းခြင်းကိုကုသရာတွင်အသုံးပြုသည့်လူကြိုက်များသောဆေးနှစ်မျိုးဖြစ်သည်။ မူးယစ်ဆေးနှစ်မျိုးလုံးသည်အဆစ်အမြစ်ရောင်ရမ်းခြင်း၊ အရိုးပွရောဂါ၊ အသင့်အတင့်မှအသင့်အတင့်နာကျင်မှုနှင့်မူလရောဂါဖြစ်ပွားမှု (ရာသီသွေးကြောကျဉ်းခြင်း) ၏လက္ခဏာများနှင့်လက္ခဏာများကိုသက်သာစေရန်ညွှန်ပြသည်။ နာတာရှည်ရောဂါလက္ခဏာများသက်သာခြင်း၊ bursitis၊ စူးရှသောဂေါက်ရောဂါ၊ ankylosing spondylitis နှင့် Polyarticular လူငယ် idiopathic arthritis ရောဂါလက္ခဏာများသက်သာစေရန်လည်းညွှန်ပြသည်။
အခြေအနေ နပိုလီယံ Ibuprofen
ဂေါက်ရောဂါ ဟုတ်တယ် တံဆိပ်ကပ်ထားပါသည်
Polyarticular လူငယ် idiopathic အဆစ် ဟုတ်တယ် တံဆိပ်ကပ်ထားပါသည်
နူးညံ့သောအလယ်အလတ်မှနာကျင်မှု ဟုတ်တယ် ဟုတ်တယ်
အဓိက dysmenorrhea ဟုတ်တယ် ဟုတ်တယ်
naproxen သို့မဟုတ် ibuprofen သည်ပိုမိုထိရောက်ပါသလား။
randomised, double- မျက်စိကန်း, ရလဒ်များအရအိပ်ယာ -controlled လေ့လာမှုများ ဒူးဆစ်၏အရိုးပွရောဂါအတွက် naproxen ကို ibuprofen နှင့်နှိုင်းယှဉ်ခြင်း၊ နှစ်မျိုးလုံးကိုတစ်ပတ်၊ OTC (အနိမ့်) ဆေးများကိုကြည့်ခြင်း၊ ၎င်းဆေးနှစ်မျိုးလုံးသည်နာကျင်မှုကိုလျှော့ချရာတွင်ထိရောက်မှုရှိကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည်။ Naproxen သည်အနည်းငယ်ပိုမိုထိရောက်ကြောင်းနှင့်ညဘက်နာကျင်မှုကိုလျှော့ချရာတွင်ပိုမိုထိရောက်ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည်။ နှစ် ဦး စလုံးမူးယစ်ဆေးဝါးများသည်းခံခဲ့ကြသည်။
နောက်ထပ်သေးငယ်တဲ့လေ့လာမှု naproxen ကို ibuprofen နှင့်နှိုင်းယှဉ်ခြင်း မူးယစ်ဆေးနှစ်မျိုးလုံးသည်တောင့်တင်းမှုကိုလျှော့ချရန်၊ နာကျင်မှုအနားယူရန်၊ လှုပ်ရှားမှုအတွက်နာကျင်မှု၊ Naproxen သည်ဤလေ့လာမှုတွင်ပိုမိုထိရောက်ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည်။ လူနာများစွာတို့သည်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ၊ သို့သော် naproxen ကိုသောက်သောလူနာတစ် ဦး သည် GI သွေးထွက်ခဲ့သည်။
အနှစ် 20 ၌တည်၏ NSAIDs ၏ပြန်လည်သုံးသပ် သုတေသီများသည် NSAID ရွေးချယ်ရာတွင်အခက်အခဲရှိကြောင်းအသိအမှတ်ပြုပြီး analgesic ၏ရွေးချယ်မှုသည်သက်သေအထောက်အထားထက်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအတွေ့အကြုံအပေါ် အခြေခံ၍ မကြာခဏဖော်ပြခဲ့သည်။ သူတို့ကဆက်ပြောသည်မှာလေ့လာမှုအများစုသည်နာတာရှည်အခြေအနေများထက်မဟုတ်ဘဲစူးရှသော၊ နာတာရှည်အခြေအနေများအတွက်ဖြစ်ကြောင်း၊ ၎င်းလေ့လာမှုများသည်မည်သည့် NSAID သည်အကောင်းဆုံးဖြစ်ကြောင်းဆုံးဖြတ်ရန်မတတ်နိုင်ကြောင်းဆက်လက်ပြောကြားသည်။ စာရေးသူများအနေဖြင့် NSAID ဆေး၏အနိမ့်ဆုံးဆေးပမာဏကိုအချိန်တိုအတွင်းအသုံးပြုခြင်း၏အရေးပါမှုကိုအလေးထားပြောကြားခဲ့သည်။ Tylenol (acetaminophen) သည်မလုံလောက်ပါက ibuprofen (GI အကျိုးသက်ရောက်မှုမြင့်မားသောသူများအတွက်အစာအိမ်ကိုကာကွယ်ရန်ဆေးဝါးများနှင့်အတူ) နည်းသောဆေးထိုးနည်းဖြင့်စတင်ခြင်းသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
naproxen စျေးနှုန်းသတိပေးချက်များအတွက် sign up ပြုလုပ်ပြီးစျေးနှုန်းပြောင်းလဲသွားသည့်အခါရှာဖွေပါ။
ibuprofen နှင့် Naproxen တို့၏ကုန်ကျစရိတ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်မှုများ
Naproxen နှင့် ibuprofen တို့ကို OTC နှင့် Rx ဗားရှင်းနှစ်မျိုးလုံးအတွက်သင့်တင့်စွာစျေးနှုန်းသတ်မှတ်ထားသည်။ မူးယစ်ဆေးဝါးနှစ်မျိုးလုံးကိုဆေးအာမခံနှင့် Medicare အပိုင်း D ဆေးညွှန်း - အစွမ်းဖြင့်ဖော်ပြထားသည်။ Naproxen အတွက်ပုံမှန်ဆေးညွှန်းသည် ၆၀၊ ၅၀၀ မီလီဂရမ်ဆေးပြားများအတွက်ဖြစ်ပြီးအာမခံမရှိဘဲဒေါ်လာ ၃၀ မှဒေါ်လာ ၄၀ ထိကုန်ကျမည်ဖြစ်သည်။ Ibuprofen အတွက်ပုံမှန်ဆေးညွှန်းမှာ ၃၀၊ ၈၀၀ မီလီဂရမ်ဆေးပြားအတွက်ဖြစ်ပြီးအာမခံမရှိဘဲဒေါ်လာ ၁၈ ဒေါ်လာကျသင့်သည်။ အာမခံနှင့် Medicare အပိုင်း D ၏ပေးချေမှုများသည်အစီအစဉ်ပေါ် မူတည်၍ ကွဲပြားလိမ့်မည်။ naproxen နှင့် ibuprofen ပေါ်တွင် SingleCare ကူပွန်ကို အသုံးပြု၍ သင်ငွေစုဆောင်းနိုင်သည်။
ပုံမှန်အားဖြင့်အာမခံဖြင့်ဖုံးလွှမ်း? ဟုတ်ကဲ့ - ဆေးညွှန်း - ခွန်အားပါ ဟုတ်ကဲ့ - ဆေးညွှန်း - ခွန်အားပါ
ပုံမှန်အားဖြင့် Medicare အပိုင်း D ကိုဖုံးလွှမ်း? ဟုတ်ကဲ့ - ဆေးညွှန်း - ခွန်အားပါ ဟုတ်ကဲ့ - ဆေးညွှန်း - ခွန်အားပါ
စံသောက်သုံးသော # 60, 500 မီလီဂရမ်ဆေးပြား # 30, 800 မီလီဂရမ်တက်ဘလက်
ပုံမှန် Medicare copay အပိုင်း D ကို $ 0-20 $ 0-22
SingleCare ကုန်ကျစရိတ် $ 9- $ 20 $ 5- $ 8
ibuprofen နှင့် naproxen ၏ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ
naproxen နှင့် ibuprofen တို့သည်နှစ်မျိုးလုံး NSAID များဖြစ်သောကြောင့်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများသည်ဆေးနှစ်မျိုးလုံးအတွက်တူညီသည်။ အသုံးများသောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများမှာအစာအိမ်နှင့်အူလမ်းကြောင်း (GI) ဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင်အပူလောင်ခြင်း၊ ဝမ်းဗိုက်နာကျင်ခြင်း၊ ဝမ်းချုပ်ခြင်းနှင့် / သို့မဟုတ်ဝမ်းလျှောခြင်းတို့ပါဝင်သည်။ အချို့သောလူနာများသည်ပျို့ချင်ခြင်း၊
ပူလောင်ခြင်း ဟုတ်တယ် 3-9% ဟုတ်တယ် ၁-၁၆%
ပျို့ချင်သည် ဟုတ်တယ် 3-9% ဟုတ်တယ် ၁-၁၆%
ဝမ်းဗိုက်နာကျင်မှု ဟုတ်တယ် 3-9% ဟုတ်တယ် ၁-၁၆%
ဝမ်းချုပ်ခြင်း ဟုတ်တယ် 3-9% ဟုတ်တယ် ၁-၁၆%
ဝမ်းလျှောခြင်း ဟုတ်တယ် <3% ဟုတ်တယ် ၁-၁၆%
ခေါင်းကိုက်ခြင်း ဟုတ်တယ် 3-9% ဟုတ်တယ် ၁-၃%
မူးယစ်ဆေးဝါး ဟုတ်တယ် 3-9% ဟုတ်တယ် 3-9%
အိပ်ငိုက် ဟုတ်တယ် 3-9% မဟုတ်ဘူး -
အခွံ (ယားယံခြင်း) ဟုတ်တယ် 3-9% ဟုတ်တယ် 3-9%
Tinnitus (နားထဲမှာအူ) ဟုတ်တယ် 3-9% ဟုတ်တယ် ၁-၃%
ဖောရောင် (ရောင်ရမ်းခြင်း) ဟုတ်တယ် 3-9% ဟုတ်တယ် ၁-၃%
Dyspnea (အသက်ရှူကျပ်ခြင်း) ဟုတ်တယ် 3-9% မဟုတ်ဘူး -
ရင်းမြစ်: DailyMed (naproxen) , DailyMed ( ibuprofen )
ibuprofen နှင့် naproxen ဆေးဝါးဆက်ဆံမှု
Naproxen သို့မဟုတ် ibuprofen ကို Coumadin (warfarin) ကဲ့သို့သော anticoagulant ဖြင့်မသောက်သင့်ပါ၊ ၎င်းသည်သွေးထွက်ခြင်းအန္တရာယ်ကိုမြင့်တက်စေနိုင်သည်။ Aspirin ကဲ့သို့သော NSAIDs များနှင့် naproxen သို့မဟုတ် ibuprofen ကိုသောက်ခြင်းသည်သွေးထွက်ခြင်းနှင့် GI ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကိုတိုးပွားစေနိုင်သည်။ Naproxen သို့မဟုတ် ibuprofen သည် ACE inhibitors၊ angiotensin receptor blockers၊ beta blockers နှင့် diuretics ဆေးများအပါအဝင်သွေးပေါင်ချိန်သည့်ဆေးများနှင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်နိုင်သည်။ နှစ်မျိုးလုံးမူးယစ်ဆေးဝါးနှစ်မျိုးလုံးသည်စိတ်ကျဆေးများကိုရောနှောခြင်း၊ သွေးထွက်ခြင်း (အသက်အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သည့်) နှင့်ဆိုဒီယမ်ဓာတ်နည်းစေခြင်းများကိုပါပြုလုပ်နိုင်သည်။ မူးယစ်ဆေးဝါးအပြန်အလှန်ဆက်စပ်မှုအပြည့်အစုံအတွက်သင်၏ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပညာရှင်နှင့်တိုင်ပင်ပါ။
မူးယစ်ဆေးဝါး မူးယစ်ဆေးအတန်း နပိုလီယံ Ibuprofen
coumadin (warfarin) Anticoagulant / အသွေးပါးလွှာ ဟုတ်တယ် ဟုတ်တယ်
အခြား NSAIDs NSAIDs ဟုတ်တယ် ဟုတ်တယ်
Vasotec (enalapril) ACE inhibitors ဟုတ်တယ် ဟုတ်တယ်
Diovan (valsartan) ARB (angiotensin receptor blockers) ဟုတ်တယ် ဟုတ်တယ်
Tenormin (atenolol) Beta blockers ဟုတ်တယ် ဟုတ်တယ်
Zoloft (sertraline) SSRI (ရွေးချယ်သည့် serotonin ကိုပြန်လည်သိမ်းဆည်းသော inhibitors) ဟုတ်တယ် ဟုတ်တယ်
အမ်မလာ (nortriptyline) Tricyclic စိတ်ကျရောဂါ ဟုတ်တယ် ဟုတ်တယ်
Cymbalta (duloxetine) SNRI (serotonin နှင့် norepinephrine ပြန်လည်သောက်သုံးမှုတားစီးသူများ) ဟုတ်တယ် ဟုတ်တယ်
Lanoxin (digoxin) နှလုံး glycoside ဟုတ်တယ် ဟုတ်တယ်
လီသီယမ် Antimanic agent ဟုတ်တယ် ဟုတ်တယ်
ပacိဇီဝဆေး ပacိဇီဝဆေး ဟုတ်တယ် ဟုတ်တယ်
Carafate (sucralfate) အကာအကွယ် ဟုတ်တယ် မဟုတ်ဘူး
Questran (cholestyramine) သည်းခြေရည်အက်ဆစ် sequestrant ဟုတ်တယ် ဟုတ်တယ်
ibuprofen vs. naproxen ၏သတိပေးချက်များ
naproxen နှင့် ibuprofen နှစ်မျိုးလုံးသည် NSAIDs ဖြစ်သောကြောင့်၎င်းတို့တွင်တူညီသောသတိပေးချက်များရှိသည်။
သေတ္တာသတိပေးချက် (FDA မှလိုအပ်သည့်အတိုင်းအပြင်းထန်ဆုံးသတိပေးချက်) မှာရှိသည်။
နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာ thrombotic ဖြစ်ရပ်များ , ကဲ့သို့ နှလုံးရောဂါသို့မဟုတ်လေဖြတ်ခြင်း သေစေနိုင်သောအရာ, ပေါ်ပေါက်လိမ့်မည်။ စွန့်စားမှုသည်စောစောစီးစီးကုသမှုခံယူနိုင်သည်။
naproxen သို့မဟုတ် ibuprofen ကို CABG ခွဲစိတ်ကုသမှုတွင်ဆန့်ကျင်သည်။
သေစေနိုင်သောဖြစ်နိုင်သည့် GI သွေးထွက်ခြင်း၊ အနာသို့မဟုတ်အစာအိမ်သို့မဟုတ်အူ၏ဖောက်ခြင်းဖြစ်နိုင်ခြေမြင့်မားသည်။ ၎င်းသည်မည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုသတိပေးမှုမရှိဘဲဖြစ်ပွားနိုင်သည်။ သက်ကြီးရွယ်အိုများရှိသူများသို့မဟုတ်ရောဂါကူးစက်ခံထားရသောအနာရောဂါရှိသူနှင့် / သို့မဟုတ် GI သွေးထွက်သည့်လူနာများသည်ပိုမိုမြင့်မားသောအန္တရာယ်ရှိသည်။ ဤအန risks တရာယ်များကြောင့်လူနာများအနေဖြင့်အနိမ့်ဆုံးပမာဏကိုဖြစ်နိုင်သမျှကာလတိုအတွက်အသုံးပြုသင့်သည်။
ဤလူနာများတွင်ပြင်းထန်။ ဆိုးဝါးသော anaphylactic တုန့်ပြန်မှု၏အန္တရာယ်ကြောင့် NSAIDs ကိုပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါ၊ အဖုအပိန့်အမြှေးရောင်ကဲ့သို့သောမတည့်မှုတုံ့ပြန်မှုသမိုင်းရှိလူနာများတွင်မသုံးသင့်ပါ။
နှလုံးရောဂါထပြီးနောက်လူနာများကို NSAIDs ဖြင့်မကုသသင့်ပါ။
အသည်းကိုအဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေနိုင်သည့်အန္တရာယ်အနည်းငယ်ရှိသည်။ ၀ မ်းလျှောခြင်း၊ ယားခြင်း၊ ယားခြင်း၊ အသားဝါခြင်း၊ ညာဘက်အထက်ပိုင်းပိုင်းနူးညံ့ခြင်းနှင့်တုပ်ကွေးကဲ့သို့သောလက္ခဏာများကိုသတိထားသင့်ပြီးရောဂါလက္ခဏာများပေါ်ပေါက်ပါကအရေးပေါ်ကုသမှုခံယူရမည်။
သွေးတိုးရောဂါ (မြင့်မားသောသွေးဖိအား) ပေါ်ပေါက်သို့မဟုတ်ပိုဆိုးလာနိုင်ပါတယ်။
ရေရှည်အသုံးပြုခြင်းသည်ကျောက်ကပ်ကိုထိခိုက်စေနိုင်သည်။ လူနာများကိုကျောက်ကပ်လည်ပတ်မှုအတွက်စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးသင့်သည်။ ချို့ယွင်းသောကျောက်ကပ်လုပ်ငန်းဆောင်တာရှိလျှင် NSAID များကိုမသုံးသင့်ပါ။
ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါ, နှာခေါင်း polyps နှင့် Aspirin ကို (Aspirin ကိုအထိခိုက်မခံပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါ) နှင့်အတူလူနာ NSAIDs ကိုရှောင်ကြဉ်သင့်ပါတယ်။
exfoliative အရေပြားရောင်ရမ်းခြင်း၊ Stevens-Johnson Syndrome (SJS) နှင့်အဆိပ်အတောက်ဖြစ်သော epidermal necrolysis (TEN) m တို့ပါဝင်နိုင်သည့်ပြင်းထန်သောအရေပြားတုံ့ပြန်မှု၊ အရေပြားတုံ့ပြန်မှုလက္ခဏာရှိလျှင်လူနာများသည် NSAID ကိုရပ်တန့်ပြီးကုသသင့်သည်။
NSAIDs ဖြင့်ကုသသောလူနာများတွင်သွေးအားနည်းရောဂါဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ သွေးအားနည်းရောဂါလက္ခဏာများပေါ်ပေါက်လျှင်လူနာများကိုစစ်ဆေးသင့်သည်။
ရေရှည် NSAIDs ရှိလူနာများကို CBC နှင့် chem profile ဖြင့်ပုံမှန်စစ်ဆေးသင့်သည်။
NSAID များကိုသန္ဓေသားပြွန် arteriosus ကိုအချိန်မတန်ဘဲပိတ်ပစ်နိုင်သောကြောင့်ရက်သတ္တပတ် ၃၀ ကိုယ်ဝန် (တတိယသုံးလပတ်) မှစတင်ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးများမသုံးသင့်ပါ။ ပထမနှင့်ဒုတိယသုံးလပတ်တစ်လျှောက်လုံးသင်၏ကျန်းမာရေးပြုစုစောင့်ရှောက်သူကိုတိုင်ပင်ပါ။ NSAIDs များသည်မျိုးဥထွက်ခြင်းနှင့်လည်းဝင်ရောက်စွက်ဖက်နိုင်သည်။ သင်ကိုယ်ဝန်ဆောင်ရန်ကြိုးစားနေပါကသင်၏ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူနှင့်ဆွေးနွေးပါ။
Naproxen နှင့် Ibuprofen နှင့်ပတ်သက်ပြီးမကြာခဏမေးသောမေးခွန်းများ
နာရိုပိုစန်သည်နာကျင်မှုနှင့်ရောင်ရမ်းခြင်းကိုကုသရာတွင်အသုံးပြုသည့် NSAID (nonsteroidal anti-inflammatory drug) ဖြစ်သည်။ ဒါဟာအမှတ်တံဆိပ်နှင့်ယေဘုယျနှစ် ဦး စလုံးနှင့်ဆေးညွှန်းအဖြစ်အပြင် OTC အတွက်ရရှိနိုင်ပါသည်။
Ibuprofen သည်နာကျင်မှုနှင့်ရောင်ရမ်းခြင်းကိုအသင့်အတင့်မှအလယ်အလတ်ရှိသောကုသမှုများပြုလုပ်ပေးသည်။ ၎င်းကိုအမှတ်တံဆိပ်နှင့်ယေဘူယျအားဖြင့်ဆေးညွှန်းနှင့်သော်လည်းကောင်း၊
naproxen နဲ့ ibuprofen အတူတူလား။
နှစ်မျိုးလုံးမူးယစ်ဆေးဝါး FDA ကအတည်ပြုထားသော NSAIDs ဖြစ်သည်။ အကြောင်းမှာ၎င်းတို့သည် NSAID နှစ်ခုလုံး ဖြစ်၍ naproxen နှင့် ibuprofen တို့သည်တူညီမှုများစွာရှိသော်လည်းခြားနားမှုများလည်းရှိသည်။ အသေးစိတ်ကိုအထက်တွင်ကြည့်ပါ။ အခြား NSAID များပါဝင်သည် Celebrex (celecoxib, COX-2 inhibitor)၊ မိုဘိုင်း (meloxicam)၊ Aspirin နှင့် Relafen (nabumetone) ။ Tylenol (acetaminophen) သည် NSAID တစ်ခုမဟုတ်သော်လည်း NSAIDs အနီးတွင်တွေ့ရှိလေ့ရှိသည်။ Tylenol သည်အဖျားတက်ခြင်းနှင့်နာကျင်ခြင်းအတွက်အထောက်အကူပြုသော်လည်းရောင်ရမ်းခြင်းကိုမကုသပါ။
naproxen နဲ့ ibuprofen ကပိုကောင်းတာလား။
အထက်တွင်ဆွေးနွေးခဲ့သည့်အတိုင်း naproxen နှင့် ibuprofen သည်တူညီကြပြီးနာကျင်မှုနှင့်ရောင်ရမ်းခြင်းကိုလျော့နည်းစေသည်။ ၎င်းတို့တွင်အလားတူဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများနှင့်အန္တရာယ်များရှိသည်။ များသောအားဖြင့်၎င်းသည်သင့်အတွက်ပိုမိုကောင်းမွန်သောဆေးဝါးဖြစ်ရန်ကိုယ်ပိုင်ရွေးချယ်မှုကိစ္စဖြစ်သည်။ သင်၏ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူအားလမ်းညွှန်မှုတောင်းခံပါ။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ် naproxen နှင့် ibuprofen ကိုသုံးလို့ရပါသလား။
Naproxen, ibuprofen သို့မဟုတ် NSAID တို့ကိုကိုယ်ဝန်တတိယသုံးလပတ်တွင်အသုံးမပြုသင့်ပါ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းတို့သည်သန္ဓေသားပြွန် arteriosus ကိုအချိန်မတိုင်မီပိတ်နိုင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ အခြားကိုယ် ၀ န်အဆင့်များ၌ NSAID အသုံးပြုမှုနှင့် ပတ်သက်၍ သတင်းအချက်အလက်အလုံအလောက်မရှိသောကြောင့်သင်၏ OB / GYN နှင့်ဆွေးနွေးပါ။ အကယ်၍ သင်သည်လက်ရှိတွင် naproxen သို့မဟုတ် ibuprofen ကိုသုံးပြီးသင်ကိုယ်ဝန်ရှိနေကြောင်းတွေ့ရှိပါကလမ်းညွှန်မှုအတွက်သင့်ဆရာဝန်နှင့်တိုင်ပင်ပါ။
ငါ naproxen vs. ibuprofen ကိုအရက်နဲ့သောက်နိုင်သလား။
naproxen သို့မဟုတ် ibuprofen ကိုသောက်သုံးခြင်းနှင့်အရက်သောက်ခြင်းသည် gastritis (အကာအကွယ်အစာအိမ်နံရံ၏ရောင်ခြင်း) နှင့်အူလမ်းကြောင်းအူလမ်းကြောင်းအတွက်သိသိသာသာမြင့်တက်နိုင်သည်။
သင် naproxen နှင့် ibuprofen တို့ကိုအတူတူသောက်လျှင်ဘာဖြစ်မည်နည်း။
naproxen နှင့် ibuprofen တို့ကိုအတူတကွမယူပါနှင့်။ သင်၏တံဆိပ်များကိုစစ်ဆေးပါ။ ပိုကောင်းတာကသင်ဆေးတစ်ချိန်တည်းမှာ NSAID တစ်ခုသာသောက်ရန်ဆေးဝါးပညာရှင်အထူးသဖြင့်ပေါင်းစပ်ဆေးများနဲ့မေးပါ။ နှစ် ဦး စလုံးသောက်ခြင်းသည်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများသာမကအစာအိမ်နှင့်သွေးထွက်ခြင်းတို့ကိုဖြစ်ပွားစေနိုင်သည်။
Naproxen သည်ကြွက်သားကိုဖြေလျှော့ပေးသောအရာမဟုတ်ပါ။ ၎င်းသည်နာကျင်မှုဖြစ်စေသောဆေးဝါးဖြစ်ပြီးရောင်ရမ်းခြင်းကိုလည်းကူညီသည်။ အချို့သောလူကြိုက်များသောကြွက်သားဖြေလျှော့သူများမှာ Flexeril (cyclobenzaprine) သို့မဟုတ် Skelaxin (metaxalone) တို့ပါ ၀ င်သည်။ ၎င်းသည်ရှုပ်ထွေးနိုင်သည်။ ဘာကြောင့်လည်းဆိုသော် naproxen သည်နည်းပညာအားဖြင့်ကြွက်သားဖြေလျှော့သူမဟုတ်သော်လည်း၎င်းသည်ပျော့ပျောင်းသောကြွက်သားနာကျင်မှုကိုသက်သာစေသည်၊
လက်ဖက်ရည်ကကိုယ်အလေးချိန်ကျဖို့ကူညီပေးနိုင်တဲ့နည်းလမ်း ၁၀ မျိုး
Robaxin vs. Flexeril: ကွဲပြားခြားနားမှုများ၊ တူညီခြင်းနှင့်သင့်အတွက်ပိုကောင်းသည်
ပဋိဇီဝဆေးများမပါဘဲ uti ကိုအမြန်ဖယ်ရှားနည်း